/ 1.20 Nhichapụ YouTube ọwa / videos
Top 5 undelete gbakwunyere uzo ozo softwares on windows
Top 5 undelete gbakwunyere ọzọ softwares on Mac
Anyị niile nwere mkpa data echekwara na anyị laptọọpụ na kọmputa na mberede ọnwụ nke data pụrụ ịbụ nnọọ egbu egbu mgbe ụfọdụ. Data nwere ike ịbụ azụmahịa faịlụ, media faịlụ na ụdị nke foto na vidiyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ faịlụ. Otú ọ dị, ma Windows na Mac-enye ihe dị ukwuu nke nchebe anyị data na data ọnwụ bụghị nnọọ ugboro ugboro. Ọnọdụ nwere ike na-abata mgbe anyị na-ejighi anyị niile data na ya mere ndị a data mgbake ngwaọrụ-enyere gị aka na-azụ gị data tupu ọ na-ruo mgbe ebighị ebi.
NTFS undelete Mmemme
NTFS undelete bụ ihe ngwa (omume) na-enye gị ohere undelete faịlụ na ị furu a nnọọ mfe na ụzọ dị mfe. NTFS undelete ngwa nwere ike mfe weghachi niile ụdị nke faịlụ site na ngwaọrụ ndị na-eji NTFS ma ọ bụ abụba faịlụ usoro. Ọ na-arụ ọrụ niile ụdị nke mbughari media dị ka USB isi mkpịsị aka draịva na SD kaadị.
Usoro ihe omume naputa faịlụ ehichapụ draịvụ ike gị ọbụna mgbe i bupụrụ gị egweri biini.
Ọ undelete faịlụ nnọọ ngwa ngwa na-adị mfe.
Ọ na-akwado niile faịlụ na ụdị na-extensions.
Ọ bụ dakọtara na SD kaadị na USB draịva.
1. Ọ na-akwado Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, na Server 2008 nke na-egosi na ọ nwere nnukwu n'elu ikpo okwu.
2. Ọ na-ewe nanị ọtụtụ minit naghachi gị furu efu faịlụ.
3. Ọ depụtara Natara faịlụ na oyiyi site aha, ọnọdụ, size, ụzọ, ụbọchị kere wdg nke na-eme ọ dị nnọọ mfe idozi faịlụ.
1. A bit nke oru ihe ọmụma a chọrọ iji rụọ software dị ka ihe ọmụma nke faịlụ extensions wdg
Review site ọrụ
Part 1 Top 5 undelete gbakwunyere uzo ozo softwares on windows
Wondershare Data Recovery Bụ ihe ịtụnanya ngwá ọrụ dị ka-enyere gị aka naghachi faịlụ na e mmadụ na mberede ehichapụ ọ bụ furu efu na ụfọdụ ndị ọzọ ụzọ. Ọ na-enye ọtụtụ nhọrọ naghachi faịlụ na efu data. Ọ na-akwado ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ na-ahuta ka ndị kasị mma data mgbake software dị taa.
1. Ọ na-akwado na naputa ihe karịrị 550 ụdị nke faịlụ.
2. Ọ na-achọ kacha nta usoro chọrọ mgbe tụnyere ndị ọzọ softwares.
3. Ọ naputa data nnọọ rụọ ọrụ nke ọma na nnọọ mfe na ngwa ngwa otú ahụ.
1. The zuru version na-akwụ ụgwọ na ya mere free version nwere nnọọ ụkọ atụmatụ.
Ratings na Nyocha
Nkezi fim bụ maka: 4.5 nke 5 kpakpando.
Recuva bụ a ọrụ enyi na enyi windows data mgbake ngwá ọrụ na-eji na-agbake efu na efu faịlụ. Ọ na-enyere gị aka warara gị search ụdị iji foto, music, akwụkwọ, video na ndị ọzọ na faịlụ. Ọ na-eji a green / odo / red ìhè usoro na-egosi ekwe omume nke mgbake nke faịlụ gị.
1. Ọ rụrụ a miri nnọọ emi search ịchọta gị ehichapụ faịlụ.
2. Ọ bụ onye ọrụ enyi na enyi na-enye gị ohere warara gị search dị irè karị.
1. The software na-ewe oge iji naghachi furu efu data mgbe tụnyere ndị ọzọ softwares.
Ratings na reviews
Nkezi fim bụ 4 nke 5 kpakpando.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma softwares dị ka ihichapụ accidently ehichapụ faịlụ site na gị usoro. Ọ nwere ngwa ngwa na oru oma algọridim na browses, searches na-eweghachi faịlụ nnọọ rụọ ọrụ nke ọma.
1. Ọ a Hichapụ Files ngwá ọrụ nhọrọ na ike na ntukwasi-obi ihichapụ faịlụ mmekwata.
2. Ọ nwere ike naghachi faịlụ na e ehichapụ si egweri biini na site kwa na ike draịva, floppy draịva, USB draịva na dijitalụ ese foto.
1. Ọ chere ihu nsogbu nọ na-agbake JPEG ụdị faịlụ nke bụ ihe kacha drawback nke software.
Nkezi Fim bụ 3.8 nke 5 kpakpando.
4. Amamihe Data Recovery
Ọ dị nnọọ mfe data mgbake ngwá ọrụ dị maka agbake gị furu efu faịlụ. Ọ nwere nnọọ mfe interface na-erughị mgbagwoju anya menu nhọrọ na dialog igbe. Ọ na-arụ ọrụ na ma abụba na NTFS ụdị nke usoro.
1. Ọ nwere nnọọ mfe ọrụ enyi na enyi interface na ngwa ngwa mgbake oge.
1. Ọ akwado faịlụ mgbake maka USB draịva.
2. Free version dị naanị maka ojiji nkeonwe.
5. Obere Ngwá Ọrụ nkebi mgbake
Obere Ngwá Ọrụ nkebi Iweghachite bụ a free data mgbake software dị na-enyere aka naghachi ehichapụ, furu efu ma ọ mebiri emebi draịva na partitions on Windows, na mgbe ahụ na-enyere aka naghachi data site na ha. Ọ na-akwado ike draịva, USB draịva na nile di iche iche nke ndị ọzọ na flash draịva.
1. Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro dị ka ide disk, SATA disk, SCSI disk na mbughari disk, na-akwado FAT12, FAT16, FAT32, VFAT, NTFS na NTFS5 faịlụ usoro.
2. Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ formats na extensions.
Nkezi fim bụ 4.8 nke 5 kpakpando.
Part 2 Top 5 undelete gbakwunyere ọzọ softwares on Mac
Nkezi fim bụ 4.5 nke 5 kpakpando.
2. Obere Ngwá Ọrụ Mac Data Recovery
Obere Ngwá Ọrụ Mac Data Recovery bụ a free data mgbake software maka Mac ọrụ dị na-enyere aka naghachi ehichapụ, furu efu ma ọ mebiri emebi draịva na partitions on Windows, na mgbe ahụ na-enyere aka naghachi data site na ha. Ọ na-akwado ike draịva, USB draịva na nile di iche iche nke ndị ọzọ na flash draịva.
1. Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro dị ka HFS +, abụba 16/32 na NTFS faịlụ usoro.
Disk warrior bụ otu n'ime ewu ewu data mgbake software maka Mac ọrụ dị taa. Otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ a software bụ ya pụtara ìhè ọrụ interface. Ọ ga-eji iji weghachite photos, videos, akwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
1. Ọ bụ onye dị elu software na pụkwara naghachi data si gwụsịrị mbanye.
2. Ọ na-egosiputa ndekọ njikarịcha index maka onye ọ bụla mbanye.
3. Ọ dị nnọọ ngwa ngwa na nnọọ ịdabere na ya.
1. The chọrọ nke software bụ bit ihe mgbagwoju mgbe tụnyere ndị ọzọ.
Nkezi fim bụ 4.2 nke 5 kpakpando.
4. Disk akuakuzinwo
Disk akuakuzinwo bụ a data mgbake software na-adị mfe na-echebe faịlụ site na mberede nhichapụ na enyemaka nke mgbake volt na weere data azụ si disk. Ọ na-akwado faịlụ usoro dị ka HFS, HFS +, NTFS na abụba 32 usoro. Ọ bụ nnọọ ngwá ọrụ dị ike.
1. Ọ nwere ike Smart nlekota oru usoro nke na-enyere i nyochaa ọnọdụ nke diski ike gị na ihe ize ndụ nke ọ bụla nwere ọdịda.
2. ndabere nwere ike kere n'ime oyiyi faịlụ na ike ga-ndokwasa mgbe e mesịrị na maka data mgbake.
1. Ọ na-ewe ogologo oge iji gbakee faịlụ mgbe tụnyere ndị ọzọ mgbake ngwaọrụ.
Ọ bụ oké data mgbake ngwá ọrụ dị maka mac ọrụ taa nke bụ nnọọ mma data mgbake ngwá ọrụ na-enye ohere ka naghachi gburugburu 500 GB nke data na oge. Ọ nwere 6 dị iche iche modul nke data mgbake nke na-enyere gị aka mfe naghachi gị furu efu data.
1. isii dị iche iche ụdịdị nke data mgbake na nkebi nhọrọ.
2. Ọ bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi na mfe iji.
1. Ọ bụ a bit kpamkpam ọnụ $99.25 maka n'ụlọ Edition. N'ihi ya na-eme ka software oké ọnụ mgbe tụnyere ndị ọzọ softwares.
> Resource> Alternatives> Top 10 NTFS undelete uzo ozo na Windows na Mac